Isitshixo kulawulo lwakho lokufumana kwakhona uphawu kukuzenzela | Martech Zone
Isitshixo kulawulo lwakho lokufumana kwakhona uphawu kukuzenzela
Onke amathemba kunye nomthengi ukhuthazwa ngokwahlukileyo, fika kwishishini lakho ngeendlela ezahlukeneyo, ngamanqanaba ohlukeneyo enjongo, ufuna ulwazi olwahlukileyo, akwinqanaba ezahlukeneyo uhambo lwabathengi, kwaye silindele ukufumana kwangoko izinto abazifunayo. Akukho nto ikhathazayo njengokuzibamba xa uzama ukuthatha inyathelo elilandelayo.
Mhlawumbi yinto elula njengokutsalela umnxeba kwinkonzo yabathengi kunye nokubanjwa kwilog engapheliyo yegcisa lenkonzo kunye namaxesha okulinda. Okanye, mhlawumbi yinto efana nokuzama ukucwangcisa umboniso kodwa inkqubo yokungenisa ifom ikhokelela kwimpazamo. Nokuba yeyiphi na indlela, kukudideka kwaye olo dandatheko ludlalwa ngumthengi okanye ngumthengi ukuthatha isikhalazo sakhe kwi-intanethi nakuluntu.
Iinethiwekhi zentlalo zibonelele ngendawo emangalisayo yoluntu kubathengi nakumashishini ukuze ilizwi labo livakale. Kwaye aboyiki ukuyisebenzisa. Xa le ndlela yokuziphatha yavela okokuqala kwi-Intanethi, ii-brand zaziva ngathi ziphulukene nolawulo. Siye sabhala kwixesha elidlulileyo malunga nelahleko uphawu ukugqibelela, Kodwa ziimpawu ngempela Ungenakuzinceda?
UJohann Wrede, uMlawuli oMkhulu weSizwe we-SAP yokuzibandakanya kwabaThengi, akakholelwa njalo. Kungathintelwa ukusebenzisa amava abhalwe ngokwakho, ukuqikelela ukukhokela okanye isimilo sokuziphatha, kunye nokubeka ukhetho kubathengi phambi kwabo ngexesha abalifunayo ngalo. Ngamanye amagama - ukuba amava ayemnandi - abathengi ngebengakhalazi kwi-intanethi.
Mamela incoko yethu noJohann Wrede
Qinisekisa ukukhuphela Isikhokelo se-SAP sokuqonda kunye nokwenza imephu kwiihambo zabathengi. Unokufunda ngakumbi kuJohann kwi Ikamva loRhwebo kwaye Umda woMthengi iibhlog. Kwaye kunjalo, jonga Ukuzibandakanya kwabaThengi beSAP iimveliso.
Njengenkokeli yentengiso kwisoftware yesicelo seshishini, i-SAP inceda iinkampani zabo bonke ubungakanani kunye namashishini ukuba aqhube ngcono. Ukusuka ngasemva eofisini ukuya kwigumbi lokubhoda, kwindawo yokugcina izinto ukuya ngaphambili, kwidesktop kwizixhobo eziphathwayo - iSAP ixhobisa abantu kunye nemibutho ukuba basebenze kunye ngokufanelekileyo kwaye basebenzise ukuqonda kweshishini ngokufanelekileyo ukuze bahlale bephambili kukhuphiswano. Izicelo kunye neenkonzo ze-SAP zenza ukuba abathengi abangaphezulu kwama-291,000 basebenze ngenzuzo, baziqhelanise ngokuqhubekayo, kwaye bakhule ngokuzinzileyo. Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela SAP.
tags: ukubandakanyeka kwabathengiuhambo lwabathengiikamva lezorhweboUJohann wredeNgokwezifisontshizaumphetho wabathengi
IiSoftware eziSelfowuni: Kutheni ufuna ukwakha, ukwakha ntoni, ukuKhuthaza njani